झापामा एकजना कोरोना संक्रमित थपीए – Pradesh Network
Posted on April 26, 2020 Author pradeshnetwork	Comment(0)
विराटनगर, १४ वैशाख । झापामा थप एक जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ५० वर्षिय पुरुषमा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टी गरेको छ । उनको कोशी अस्पताल विराटनगरमा गरीएको परीक्षणमा पोजेटिभ रिपोर्ट आएकोे मन्त्रालयले जनाएको छ ।
झापामा एक जना थपीएसंगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या ५२ पुगेको छ । प्रदेश नंम्बर एकमा मात्रै संक्रमीतको संख्या ३१ पुगेको छ । उदयपुरमा २८, झापामा २ र भोजपुरमा एकजना संक्रमित भएका छन । संक्रमितको कोशी अस्पताल कोभीड १९ कोरोना उपचार केन्द्रमा उपचार भैरहेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस अघि पर्सामा २ जनामा संक्रमण भएको जनाएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीका अनुसार पर्साको वीरगन्ज निवासी दुई जना ५० वर्षीय पुरुषहरुमा संक्रमण देखिएको हो। उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
संक्रमण पुष्टि भएका दुवै जना वीरगन्ज महानगरपालिका छपकैयाका बासिन्दा हुन् । यसैवीच कोरोना संक्रमण भई उपचाररत ४ जना निको भएर घर फर्किएका छन् । वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा उपचार गराइरहेका चार जना संक्रमित आज निको भएर घर फर्किएका हुन् ।
डिस्चार्ज हुनेहरुमा छपकैयाको मक्की जामे मस्जिदमा बसेका तीन भारतीय र रौतहटका १९ वर्षीय एक युवक रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । योसँगै नेपालमा कोरोना निको हुने बिरामीको संख्या १६ पुगेको छ । त्यसमध्ये ३६ जना उपचाररत छन् भने १६ जना निको भएर डिस्चार्ज भइसकेका छन् ।
यसैवीच वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा मृत्यु भएकी युवतीको पीसीआर टेष्टको नतिजा नेगेटिभ आएको छ । र्यापिड टेष्ट गर्दा पोजेटिभ रिपोर्ट आएकी वीरगञ्ज–१० अशोकबाटिका बस्ने २३ वर्षीया युवतीको हिजो मृत्यु भएको थियो ।
उनी ब्लड क्यान्सरबाट पनि पीडित थिइन् । उनको थ्रोट स्वाब नमूना संकलन गरी पीसीआर टेष्ट गर्न हेटौंडास्थित प्रादेशिक प्रयोगशालामा पठाइएको थियो । उनको मृत्यु भएपछि परिवारका सबै सदस्यहरुलाई होम क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो ।
विराटनगर ६ चैत । प्रदेश नं. १ को प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । आजको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित भएको जानकारी गराउनुभयो । यसअघि आजै बिहान बसेको प्रदेशसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा विश्वव्यापी रुपमा फैलिररहेको भाइरसको कारण प्रदेशसभाको बैठक बसिरहन उपयुक्त नहुने सहमति भएको थियो । कोरोनाको सम्भावित […]